Yammuu haalli ati barbaadduu guutuu, dirreewwan galmee kee keessaa isa barruu agarsiissu qindeessuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, barruu otoolaa isa walfaannee kan xalayoota yaadachiisaa qindeessuu nidandeessa.
Fakkeenyaa kaanatti barruu otoola qindeessuun deemicha kutaa lama dha. jalqaba jijjiiramaa uumtta, kana booda haala uumtaa.
Jijjiirama otoola qindeessuuf:
Fakkeenyaa kutaa issa jalqabaa, jijjiirama hima haala qindeessu dha.
Saagi - Naannoowwan - Kanbiroo filadhu, fi itti aansuun caancalee jijjiiramoota cuqaasi.
Tarree Akaakuu keessatti "Jijjiiramaa qindeessi" filadhu.
Sanduuqa keessatti jijjiiramaaf Maqaa maqaa barreessi, fakkeenyaaf Yaadachiisa.
"Barruu" keessatti taree Dhangii cuqaasi.
Saanduqa 1 in the Value saagitii, achiin Insert.
cuqaasi tarreen dhangii amma dhangii "waliigalaa" agarsiisa.
Barruu otoolaf haala qindeessuu fi Barruu otolaa
Fakkeenyii kutaa lamataa irraa haala tahuu qabu gindeessuu, akkasumas barruu otoolaa galmee kee keessaa agarsiissuuf, iddooqa saaguuf gargaara.
Barruu kessatti barruu otoola saagu iddoo barbaaddutti qaree ka'i.
Saagi - Dirreewwan - Kabiroo fili, kana booda caancala Dalagalee cuqaasi.
Tarree Akaakuu keessaa "Barruu otoola" cuqaasi.
Kan barreessitu Yaadachiisaa EQ "3" sanduuqa Haalaa keessa. Karaa biraatin ammoo, barruun otoolaa kan agarsiisaamu yammu jijjiirami dirree isa ati kutaa jalqabaa qindeessitte fakkeenya kanaa sadiin walqixa gafa ta'u dha.
Mallattoon waraabbii golgamaa "3", jijjiirama isa ati kutaa jalqabaa kanaa keessatti qindeesite kan fakkeenya kanaa akka diraa barruu tahe agarsiissa.
Barruu isa akka agarsiissamu barbaadduu, yammuu sanduuqa Then keessatti haalii barbaadamuu guutuu barreessi. Dheerina barruu warra galchuu dandeessuuf, wantii sidhorkuu tokkolee hinjiru.
Barruu Otoola Agarsiisuu:
Fakkeenyaa kanatti, barruu otoola kaan agarsiisaamu yammu gatii jijjiirama haala 3 walqixa gafa ta'u dha.
Fakkeenyaa kutaa jalqaba qinda'amee dirree issa duratti qaree ka'i. Issa booda Dirroolee - Gulaalli fili.
SanduuqaGatii irratti lakkoofsa 3 waliin bakkabuusi, kana booda Cufi cuqaasi.
Yoo dirreen ofumaan hin haaromu ta'e, F9 dhibii.
Tarree ogeejjiilee otoola
Title is: Barruu Otoola